Al-Shabaab oo nin ku toogatay degmada Doon Buraale
Ururka dilaaga ah ee al-Shabaab oo looga bartay inuu ciqaabo qof Allaale qofkii ka hortago fikradahiisa gurracan wuxuu dhawaan dil toogasho ah ku fuliyay nin lagu magacaabo Axmadey Qaadi Maadey.
Toogashadaas waxay ka dhacday fagaare ku yaalla deegaanka Doon Buraale oo hoostaga degmada Qoryooley ee gobolka Sh/Hoose. Qaadiga magac ku sheegga maxkamadda al-Shabaab ee gobolkaasi oo fagaaraha ka akhriyey xukunka ayaa sheegay in Axmadey uu qirtay dhammaan eedeymaha lagu soo oogay, islamarkaana ay ku cadaatay in uu sameeyay ficilkii Qowmu Luud, sida uu hadalka u dhigay.
Waxaase is weydiis mudan inay arrinta lagu eedeeyay ninkaas uu yahay ficil aan lagu arkeyn dadweynaha Soomaaliyeed ama dhaqanka guud ee Soomaaliyeed, waxaana hubaal ah in ninkaan dembiga lagu soo oogay uu yahay mid been abuur ah.
Inta badan waxaa deegaanada ay maamusho al-Shabaab ka dhaca xukuno u badan dil toogasho ah, kuwaas oo qaar kood lagu fuliyey dad lagu soo eedeeyey basaasnimo.
Dadka ka faallooda arrimaha amniga waxay intooda badan isku raacaan in dilalka noocaan ah lagu soo oogo shacabka ku sugan goobaha uu al-Shabaab ka arrimiyo, iyagoo sheega in dadkaas ay inta badan yihiin kuwa kasoo horjeedaan dhaqammada al-Shabaab iyo falalkooda gurracan.
Xorriyo 1 Views : 10801